Modely ho an'ny hafatra an-tsoratra rehetra ilainao amin'ny orinasanao | Martech Zone
Toy ny bokotra mora maoderina izy io. Afa-tsy izay rehetra tsy hain'ny gadget any amin'ny birao taloha.
Ny fandefasan-kafatra an-tsoratra dia toy ny fomba tsotra, mivantana ary mahomby hanatanterahana saika ny zava-drehetra amin'ny orinasa ankehitriny. Ireo mpanoratra avy ao amin'ny Forbes dia miantso ny marketing amin'ny hafatra an-tsoratra ny sisin-tany manaraka. Ary io ilay tsy tianao halahelo satria ny maha-zava-dehibe ny finday eo amin'ny sehatry ny marketing nomerika ankehitriny no zava-dehibe indrindra.
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny 63% n'ny mpampiasa Smartphone dia mitazona ny gadget ho mora foana 93% amin'ny fotoana ilàny. SY 90% amin'ny fotoana, ny olona iray dia hamaky lahatsoratra ao anatin'ny telo minitra monja aorian'ny fandraisany azy
Ohatra amin'ny marketing amin'ny hafatra an-tsoratra
Ny misafidy ny hampiasa ireo fahamarinana ireo amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra amin'ny hafatra an-tsoratra mahomby dia asa aman-draharaha hendry.
Vintana ve ianao nahita ohatra amina orinasa marobe mampiasa marketing SMS amin'ny dia iray mankany amin'ny toeram-pivarotana nefa tsy voamarikao izany. Koa satria izy io dia miasa amin'ny ankamaroan'ny orinasa toa izany, dia amin'ny mpivarotra fitafiana sy fivarotana labozia ka hatrany amin'ny fivarotana kafe sy kioska finday no antony anaovany izany.
Polo Ralph Lauren dia mametraka ny marketing amin'ny hafatra an-tsoratra miaraka aminy fantatrao aloha manatona. Ireo mpanjifa misoratra anarana Polo On the Go ny tolotra manokana dia afaka misafidy ihany koa hahafantatra momba ny varotra sy ny fahatongavana vaovao.
Ny vintana dia ny tsenambarotra ihany no mampiasa marketing amin'ny hafatra an-tsoratra mba hampitana tolotra manokana mitovy amin'izany ary hahafantaran'ny mpanjifa ny hetsika sy ny varotra. Mayfair Mall any Milwaukee, Wis. dia mandray ireo vahiny ao amin'ny tranombarotra misy azy sy tranokala miaraka amin'ny famporisihana Miaraha amin'ny Club hianarana momba ny zavatra rehetra avy amin'ny fihenam-bidy ho an'ny mpikambana ihany hatramin'ny fanokafana fivarotana vaovao sy ny fironana farany.
Modely ho an'ny orinasa tsirairay sy ilaina rehetra
Mandritra izany, a fandinihana vao haingana notontosain'ny The Alternative Board dia nahita fa ny 19 isan-jaton'ny tompona orinasa kely dia miasa mihoatra ny 60 ora isan-kerinandro, ary iray monja amin'ireo tompona orinasa kely dimy no miasa ambany noho ny herinandro fiasana 40 ora mahazatra.
Amin'ny raharaham-barotra, sarobidy ny fotoana. Tsy misy isalasalana izany. Ka ahoana raha isaky ny manapa-kevitra ny hanomboka doka fanentanana vaovao ianao, mandefasa fampahatsiahivana fampandrenesana na fampandrenesana amin'ny mpiasao momba ny fivoriana dia misy modely iray amin'izany?
Azo atao ny manana ny maodely ilaina rehetra, tehirizina tsara amina toerana iray eo am-pelatananao. Ny hevitra dia tsy mila mamorona ny hafatra ianao fa mila mandany an'io fotoana io amin'izay vitanao tsara indrindra: fananganana orinasanao.
Ny ekipa ao amin'ny TextMagic, orinasa SMS be dia be, dia nanao ny asa rehetra ho anao, nanolotra ny maodely hafatra an-tsoratra rehetra ilainao angamba ho an'ny orinasanao miaraka amin'ireo antsipiriany lehibe rehetra eto:
Ohatra, ny hafatra an-tsoratra mandaitra dia tokony hahitana fiantsoana-mihetsika, ny anaran'ny mpandefa sy ny nomeraon-telefaona ary ny rohy fohy mankany amin'ny tranonkalan'ny mpandefa (raha ilaina).
Torohevitra momba ny karazana fampielezan-kevitra SMS
Ankoatra ireo fitsipika fototra ireo, ity misy zavatra tokony ho fantatry ny tompona orinasa rehetra momba ny karazana fampielezan-kevitra SMS:
Marketing sy SMS fampiroboroboana - Ny hafatra an-tsoratra ampiasaina amin'ny varotra sy fampiroboroboana dia tokony ho ampy hahasarika ny roa hiantsoana ny handray ilay hetsika ary hamorona fahatsapana fa maika. Ireto dia fitaovana mahomby hampitana zavatra toy ny mividy, mahazo amidy iray ary koa hitazomana ny mpanjifa amin'ny sakafo atoandro sy tapakila, hetsika manokana na fanovana amin'ny fotoana fanokafana na fanakatonana ho an'ny orinasanao.
Fampahatsiahivana amin'ny fanendrena - Ny fampahatsiahivana amin'ny fanendrena mahomby dia tokony ahitana ny daty sy ora nanaovana ilay fanendrena, toerana, ny anaranao (na ny anaran'ny orinasa) ary ny nomeraon-telefaonanao. Ilaina manokana io ho an'ny salon volo, mpitsabo nify, dokotera, banky, ary orinasa hafa mifandraika amin'ny fanendrena.
Fampandrenesana SMS sy fanairana - Manazava ny tena manokana, fampandrenesana ary fanairana dia tokony hampidirina ao anaty antsipiriany toy ny adiresy fandefasana, ny ora ho tonga, ny anaran'ny orinasa ary ny nomeraon-telefaona. Ireto hafatra ireto dia manampy indrindra amin'ny banky, ary amin'ny fampandrenesana ny mpanjifa miaraka amin'ny mombamomba ny mombamomba ny kaonty sy ny fampandrenesana ny fanovana fivoriana.
Fanamafisana ny SMS - Tsara ho an'ireo mandeha matetika, ny fanamafisana ny SMS dia tokony ahitana zavatra na ID famandrihana, anaran'ny orinasa, rohy fohy amin'ny tranokalan'ny orinasa, ary hafatra fisaorana. Ireo dia ampiasaina matetika amin'ny fampahatsiahivana momba ny sidina, fanovana amin'ny ora sidina, famandrihana hotely ary fanamafisana ny fandoavam-bola.
Raha hanao zavatra mora amin'ny orinasanao ianao, ny zavatra mora indrindra azonao atao dia ny kitiho mandefa.
Ny fandefasan-kafatra an-tsoratra dia toy ny fomba tsotra, mivantana ary mahomby hanatanterahana saika ny zava-drehetra amin'ny orinasa ankehitriny.
Ary ireo manam-pahaizana ao amin'ny TextMagic te hanampy hanampy azy io ho fitaovana ampiasainao amin'ny orinasanao, amin'izay ianao afaka mifantoka amin'izay tsara indrindra ataonao. Manolotra fitsapana maimaimpoana ny orinasa raha te hanomboka hampiasa fandefasan-kafatra be ianao.
Tags: Fivarotana finday sy tablettefinday-barotraPolopolo am-pandehananapolo ralph laurensms fampiroboroboanafandefasana hafatra an-dahatsoratrafinday avo lentaSMSfampandrenesana smsfampandrenesana smsklioba an-tsoratrafanairana hafatra an-tsoratrafampandrenesana hafatra an-tsoratramodely hafatra an-tsoratrafandefasana hafatra an-tsoratrafampahatsiahivana fandefasana hafatrafampahatsiahivana an-tsoratratextmagic
Anastasia Sviridenko dia mpitantana marketing amin'ny atiny TextMagic, vahaolana SMS be indrindra ho an'ny orinasa. TextMagic dia serivisy manome fotoana mety ho an'ny orinasa kely sy lehibe hitarika fanentanana amin'ny marketing amin'ny SMS, handefa fampandrenesana, fanairana ary fanamafisana.
Aug 16, 2017 amin'ny 5: 23 AM
Misaotra nizara vaovao mahasoa toy izany. Marina fa ny hafatra an-tsoratra rehetra dia manana endrika tokana ho an'ny varotra SMS toy ny amin'ny hafatra fanamafisana dia manana endrika samihafa mifandraika amin'ny serivisy an-tsoratra hafa.